Fomba hafa hampiasana QGIS amin'ny finday Android & iOS
QGIS dia nametraka ny tenany ho fitaovana loharano malalaka sy loharanom-paharetana mitombo haingana indrindra hampiasana ny geospatial. Faly izahay mahafantatra fa efa misy ny kinova QGIS ho an'ny finday. Ny fampiasana haingana ny rindranasa finday dia mahatonga ny fitaovana biraonao hisafidy ny hamorona kinova hampiasana amin'ny telefaona na takelaka. The ...
Featured, jeospatial - GIS, qgis
SuperGeo miditra fifanarahana amin'ny GPS PL mba hanolotra vahaolana ho an'ny iOS turnkey
SuperGeo Technologies, dia nanambara fiaraha-miasa mahaliana amin'ny GPS PL, maodely fiasa izay misarika ny saina ary ampirisihin'ireo orinasa isan'andro fa tsy mifaninana amin'ny tsena dia manao synergie hitadiavana traikefa tsara kokoa ho an'ireo mpampiasa. Manolotra vahaolana GIS ho an'ny fitaovana finday ireo orinasa roa ireo, noho ny ...
GPS / Fitaovana, SuperGIS
Izay tokony hatao raha mangalatra ny iPad
Zazalahy, mety efa miharihary ny resaka, fa na ho ela na ho haingana dia tokony ho fantatrao izay hatao rehefa misy iPad mangalatra. Ary na dia mihatra amin'ny iPhone, iPod Touch ary iMac aza ny lafin-javatra sasany, tiako ny manararaotra manamboatra azy ho fanomezam-boninahitra ny zavatra nianarako taloha: 1. Aza atao faran'izay betsaka ...
Ny faharetan'ny toerana misy ireo orinasa izay manome fitaovana ho an'ny Geo-injeniera dia ny fanavaozana sy ny fahaizany mampifanaraka ny fanavaozana ara-teknolojia. Voamarika tokoa ny fametrahana azy, amin'ny fomba amarotany ny fahaizany manokana amin'ny fifandraisan'izy ireo amin'ny orinasa, na eo aza ny zava-misy isan'andro dia lasa sarotra kokoa ny elanelana misy eo amin'ny taranja ...
Android Bentley Systems DGN I-modely iPad
Apple - Mac, AutoCAD-Autodesk, fanavaozana, Microstation-Bentley
Ny taona lehiben'i Google Chrome
Ny tranga Google Chrome dia ohatra mahagaga amin'ny voalaza 4 taona lasa izay: "Ilay mpitety tranonkala izay maniry ho lasa rafitra fiasa" Tsaroako tamin'ny volana septambra 2008 ny nanoratako ny fanombohan'ny Google ny fitetezana azy manokana, raha ny fanantenana hamongorana ny Internet Toa adala i Explorer amin'ny fomba hieritreretana izao fa ...
Mpianatra asa fanehoam-Geospatial Training
MundoGEO gazety izao takelaka
MundoGEO, orinasa be solontena indrindra eo amin'ny sehatry ny jeografia amin'ny sehatry ny serasera amerikanina latina, dia nandefa fampiharana roa ka ny magazine MundoGEO dia azo zahana avy amin'ny finday, na ny Apple iOS na Android. Vao tamin'ity taona ity, natambatra tamin'ity gazety ity ny atin'ny InfoGEO sy ny InfoGNSS, anisany izany ...
Android iPad gazety
Apple - Mac, jeospatial - GIS
Ny rafitra Global Positioning System ho toy ny tetik'asa ara-tsiansa
Niverina ny foara ara-tsiansa zanako lahy, ary taorian'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny mpampianatra momba ny mety ho tetik'asa, dia nankatoavin'izy ireo ihany ny farany izay nitsambikina efa ho iray metatra ny fifaliana ... Saika samy izy roa aho satria lohahevitra iray tena tianay izy roa. Satria ihany koa ity tetikasa ity dia nanapa-kevitra izahay fa tsy ...
Apple - Mac, Cartografia, Fampianarana CAD / GIS
Mamorona rindranasa finday ho anay
Ny conduit dia mety ho iray amin'ireo vahaolana tsara indrindra any amin'ny fananganana rindranasa finday. Ny fahalalahana ananany, nampiana isa isan'ny sehatra tohana dia maneho asa tsy mampino ataon'ireo mpamorona azy ahafahanao maka bilaogy, feed RSS na famoahana atiny media sosialy amin'ireo fampiharana vonona hozaraina amin'ny magazay ...
fanavaozana, Internet sy Blogs, My egeomates
Raha misy zavatra tsara momba ity daty ity ... miaraka amin'ny fianakaviana izany. ... avy amin'ny fihinanam-bilona ... avy amin'ny iPad ... avy amin'ny fikasana tsara indrindra
Woopra dia eto ho an'ny iPad
Woopra dia iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra amin'ny fanaraha-maso ny fivezivezena mivantana amin'ny tranokala. Fotoana vitsy lasa izay dia nanao jery todika ny rindranasa birao aho, ankoatr'izay dia misy ny kinova ho an'ny Google Chrome ary vao izao ilay kinova izay tsy nisy afa-tsy ho an'ny iPhone no nohavaozina, ao amin'ny kinova universal 2.0 mahavariana izay mifanaraka ...
Hanana Microstation ho an'ny Mac ve isika?
Roa taona lasa izay dia nanaitra anay ny AutoDesk tamin'ny fiverenany tany Mac; Na dia mbola tsy kinova mifanila tanteraka aza io ary misy fampiasa sasany tsy hita, azontsika ny fironana voamarika mankamin'ny sehatra iray fantatra amin'ny fotoana voafidy. Izany fiverenan'i Bentley tany Mac izany dia fanantenana ny hisian'ny taona vitsivitsy lasa izay. ...